Bara 2018 keessa walii galteen nageenyaa erga mallatteessamee booa Sudaan keessaa ijoollee irratti kan raawwatamu dhiittaan mirga namaa hamaan gad xiqqaateera, garuu amma iyyuu raawwatamaa jiraachuu gabaasi tokkummaa mootummootaa beeksisee jira.
Gabaasichi tokkummaan mootummootaa Adoolessa bara 2018 fi Waxabajjii 2020 gidduu yeroo jiru keessa guutuimmaa biyyattii keessatti dhiittaa mirga namaa hamaa ijoollee irratti raawwataman 618 kan mirkaneesse yoo ta’u lakkoobsi guddaan Equatoria waaltaa keessatti ta’uu ibsee jira.
Faallaa isaa tokkummaan Onkoloolessa bara 2014 fi Waxabajjii bara 2018 gidduu ijoollee Sudaan Kibbaa 9,200 irratti dhiittaan mirga namaa hamaan raawwachuu beeksiseera. Dhiittawwan mirga namaa kun ijoollee garee waraanaaf filachuu, ajjeechaa, qaama isaanii irraan miidhaa geessisuu, humnaan gudeeddii, manneen barnootaa fi hospitaalota irratti haleellaa oofuu fi gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne danquu dha.
Waggoota sana dura bara 2017 keessa dhiittaan mirga namaa Sudaan Kibbaa keessatti ijoollee irratti raawwatamu biyyoota 21 nuti dhiittaan mirgaa akkasii keessatti raawwatame nuti galmeessine keessaa sadarkaa lammaffaa ykn sadaffaa irra jira, kunis lakkoobsa guddaa dha jechuu dhaan dhimmootii ijoollee loltoota keessa jiranitti bakka buutuun muummicha barreessaa kan tokkummaa mootummootaa Virginia Gamba, VOAf ibsaniiru.
Akka gabaasa sanaatti bara 2018 fi 2019 keessa wraraana SPLA-IO haa ta’u waraana Sudaan kibbaa biraa ijoollee 2000 ta’antu gad dhiisaman. Angawoonni tokkummaa mootummootaa baatii Fulbaanaa bara 2018 keessa gareelee marii nageenyaa irratti hirmaatan jaarsummaan gidduu seenuuf jecha gamasitti imalanii jiran.
Gareen isaanii walitti bu’iinsa Sudaan kibbaaf furmaata barbaaduu keessatti kan dhiyeenya fooyyeffamee mallatteessame keessatt seerawwan kunuunsa ijoollee akka jiraatu gareen isaanii gidduu seenuu Gaambaan ibsaniiru.
Ijoolleen itti dabalaa akkuma loltummaa keessaa gad dhiisaman ijoolleen itti dabalaa walitti bu’iinsa Suaan Kibbaa irraa oolanii gara waaltaa dandammachiisaa, hawaasatti makamuu fi tajaajila argachuu danda’u jedhan. tajaajilli akkasii jiraatu malee ijoolleen kun deebisanii loltummaaf fo’amuu fi yakkaaf saaxilamuun isaan mudachuu imala jedhaniiru.